Brazil: dacwaddii madaxwaynaha oo "dib u soo noqotay" - BBC Somali
Brazil: dacwaddii madaxwaynaha oo "dib u soo noqotay"
Image caption Dilma Rousseff caddaais ayaa saaran
Dacwaddii xil ka qaadista ahayd ee lagu qaadayay madaxweynaha Brazil, Dilma Rousseff, ayaa u muuqata in ay dib u soo labo kaclaysay kaddib markii ku simaha gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanku ka noqday go’aankiisii hore een la filaynin ee ahaa in uu hakiyay cod u qaadista arrintan culus.
Gudoomiye Waldir Marahnhoa, muu sheegin sababta uu go’aankan deg degga ah u qaatay 24 saacadood kaddib markii uu amar ku bixiyay in mooshin cusub la keeno.
Hadda waxa la filayaa in aqalka Senate–ku maalinta Arabacada bilaabo dhagaysiga dawcaddan xil ka qaadista ah.
Hadii Marwo Rousseff lagu helo eedaymaha loo soo jeediyay shaqadaa laga joojin doonaa ilaa inta la gaarayo mudada loo qabto in maxkamadi dhagaysato dacwadda lagu soo oogay.
Eedaha loo soo jeediyay waxa ka mid ah in xukuumadeedu ku xad gudubtay xeerarka xisaabaadka, laakiin iyadu waxay sheegaysaa in habka xukuumadeedu u dhaqantay ay tahay hab ay u dhaqmi jireen xukuumadihii Brazil soo maray.